Sheekh Maxamed Idiris oo dhaliilay Madaxda Dowladda Federaalka | Dhacdo
Home Wararka Maanta Sheekh Maxamed Idiris oo dhaliilay Madaxda Dowladda Federaalka
Sheekh Maxamed Idiris oo dhaliilay Madaxda Dowladda Federaalka
Sheekh Maxamed Idiris oo ka mid ah Culima’udiinka Soomaaliyeed ayaa Madaxda Dowladda Federaalka ku dhaliilay inaanay la imaan qorshe dalka looga badbaadin karay qalqalka siyaasadeed ee ka jira.
“Ilaahay waxaan ka baryayaa ınuu dadka ıyo dalka Soomaalıyeed badbaadıyo, wax kasta oo dhib ahna ka hayo. Hala ogaado fitnada cidina kama faa’iiddo, kan huriya ayaa ugu hor gubta.” Ayuu yiri Sheekh Maxamed Idiris.
Sidoo kale waxaa uu sheegay muddadii ay haysteen Madaxda Dowladdu inaysan la imaan qorshe dalka looga qaban karay doorasho, isla-markaana aysan heshiis siyaasadeed oo muddo kordhin ah la gaarin dhinacyada siyaasadda, cid walbana ay talo ka diideen.
“Waxaa xaqiiq ah in muddo xileedkii dowladdu dhamaaday. Waxaa u furnayd inta aan muddadu dhammaan in loo kordhiyo ama heshiis kale la gaaro ama doorasho la qabto, intaasuba ma dhicin. Culimo iyo wax garadna horaa talo looga diiday.” Ayuu yiri Sheekh Maxamed Idiris.
Waxa uu kaloo uu yiri “Xagga sharciga Baarlamaanka ayaa xoogaa yar nafi ku dambaysaa iyo dastuurka ku meel gaarka ah ee ay ku heshiiyeen. waxaa hadda inoogu dhib yar inuu Baarlamaanku wixii lagu heshiiyay wax ku maamulo, dowladda iyo mucaaradka kursigu u muuqdaana naftooda laga badbaadiyo, dadka iyo dalkana laga badbaadsho, Ilaahow na caymi, oo ummadda sida khayrku ugu jiro waafaji.”
Sheekh Maxamed Idiris ayaa warkan ku sheegay qoraal dadka kula wadaagay barta uu ku leeyahay shabakadda bulshada wada xiriiriso ee Facebook.
Previous articleGeneral Indhacadde: Waxaa la yiri nin abeeso koriyoow adigaa u aayi
Next articleBeesha Caalamka oo war ka soo saartay shirkii wadatashiga ee Dhuusamareeb